यी ४ कारणले आउँछन् अनुहारमा डण्डिफोर, तपाईको पनि छ की ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी ४ कारणले आउँछन् अनुहारमा डण्डिफोर, तपाईको पनि छ की ?
काठमाडौँ । अनुहारमा डन्डिफोर आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन। यो साधारण कुरा हो। तर डन्डिफोर आएपछि दाग बस्नु साधारण कुरा होइन।
यसमा तपाई आफैं जिम्मेवार हुनुहुन्छ। डन्डिफोर आउनु, एक्ने आउनु (दाग आउनु) मा हामी आफ्नो छालालाई दोष दिन्छौ।
आफ्नो डाइटलाई दोष दिन्छौ । एक्ने हुनुको पछाडि केवल यि दुईवटा मात्र कारण हुँदैन् । यसको पछाडि धेरै कारणहरु जिम्मवार हुन्छ जुन हाम्रो सोच भन्दा टाढा छ । हाम्रो अनुहारमा डन्डिफोर आउने कारणहरु के के हुन त ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
१) दूध पिउन कम गर्नुः दूध पिउनु स्वस्थवद्र्धक नै मानिन्छ तर अनुहारमा डण्डिफोरको समस्या छ भने दूध पिउन कम गर्नु नै उचित हुन्छ ।
२) मौसम परिवर्तनः बाहिरी मौसम परिवर्तनका कारण हाम्रो शरीरको तापमानमा परिवर्तन आउँछन् । मौसम धेरै गर्मी भयो भने शरीरमा पसिना आउने र यसका कारण पनि डण्डिफोरको समस्या बढ्ने हुन्छ।
३) जथाभावी मेकअपः अनुहारमा विभिन्न कमसल मेकअप प्रयोग गर्दा पनि डण्डिफोरको समस्या हुने गर्छन् । जथाभावी मेकअप गरेर अनुहारमा बढ्ता चिल्लोपना आयो वा सुख्खापन भएमा पनि डण्डिफोरको खतरा हुने गर्छ ।
गलत मेकअपका कारण अनुहारको छालामा असर गर्छन् र डण्डिफोरका कारण बन्छन्।
४) खाना परिवर्तनः खानाको कारण पनि छालाको सौन्दर्यमा फरक पर्छन्। धेरै तनाब तथा लाइफस्टाइलमा ध्यान नदिँदा पनि त्यसको असर अनुहारमा देखापर्छन् र डण्डिफोर आउँछ।
मसुरको दाल डन्डिफोर हटाउन समेत उपयोगी हुन्छ । यसका निम्ति मसुरोको दाललाई पानीमा भिजाएर पिस्नुपर्छ । उक्त पेस्टमा एक चिम्टी बेसार मिलाउने । अब त्यसलाई राम्ररी अनुहारमा लगाउनुपर्छ । केही समयपछि सफा पानीले पखाल्नुपर्छ ।
बेसार र बेसनको फेस प्याक
२ चम्चा बेसनमा एक चौथाई चम्चा बेसार मिलाउने । त्यसमा गुलाब जल र कााचो दूध मिसाएर पेस्ट तयार गर्ने । यदि अनुहार तैलीय छ भने दूधको ठाउामा पानी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई अनुहारमा दिनहुा लगाउनुपर्छ, डन्डिफोरको समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
आइसक्युब अर्थात् बरफ पनि डन्डिफोर हटाउनमा उपयोगी हुन्छ । आइसक्युबले आफ्नो अनुहारमा रगड्नुपर्छ । यसले डन्डिफोर भएको स्थानमा रक्तसंचार तीव्र हुन्छ ।
मह एक उत्कृष्ट उत्पादन हो, जसले डन्डिफोरबाट तुरुन्तै आराम दिन्छ । महमा कपास डुबाएर डन्डिफोर भएको स्थानमा लगाउनुपर्छ । आधा घण्टापछि मनतातो पानीले पखाल्नुपर्छ ।
सौन्दर्यका लागि कागती उत्कृष्ट विकल्प हो । यसमा भिटामिन सी पाइन्छ । कागतीको रस प्रयोग गरेर अनुहार सफा गर्दा डन्डिफोरबाट छुटकारा पाइन्छ ।
रातभर एक कप चामल भिजाएर राख्ने । बिहान पानी छानेर पिस्ने । त्यसमा केही थोपा कागतीको रस चुहाइदिने । उक्त लेप डन्डिफोर भएको स्थानमा लगाउनुपर्छ, ठीक हुन्छ ।
डन्डिफोरको प्राकृतिक उपचारका लागि लसुन फाइदाजनक हुन्छ । केही लसुनको केस्रा पिसेर त्यसको रस निकाल्ने । उक्त रसमा कागतीको रस मिसाउनुपर्छ । त्यो मिश्रण अनुहारमा लगाएर १० मिनेटपछि सफा पानीले पखाल्नुपर्छ ।
पानीको बाफले पनि अनुहारमा रहेको डन्डिफोर हटाउन सहयोग गर्छ । बाफले छालाको रोमछिद्र खुल्छ । साथै यो यस्तो प्रक्रिया हो, जसले छालामा रहेको फोहोर मैला समेत हटाउाछ ।